Soft ụlọ Top Tent, Car Roof awning, Trailer tent - Arcadia
Anyị nwere ọkachamara oru otu
Nnyocha nyocha dị mma iji hụ na 100% ruru eru
Nye ọrụ ndị ọkachamara, oge na ọrụ.
Arcadia dị nro n'elu ụlọ elu dị iche iche dị iche iche: 1.2 * 2.4M, 1.4 * 2.4M, 1.6 * 2.4M, 1.8 * 2.4M, yana ihe ndị na-adịgide adịgide na-egbochi ihe mgbochi mmiri 280G polycotton, 600D diamond Oxford, 420D Oxford . Nha na ihe onwunwe bụ nhọrọ. A na-edozi ha ngwa ngwa ma dị mfe ịwụnye n'elu ụlọ mmanya. Ime ụlọ n'okpuru mgbakwunye bụ nhọrọ.
Ndina ala: Ibu arọ Aluminom mpempe akwụkwọ 1mm ọkpụrụkpụ
Ogidi: Ogwe osisi Aluminom Dia 16mm
Ihe nkpuchi: 6cm ụfụfụ dị elu na mkpuchi mkpuchi
Agba agba: 450G PVC na velcro na zipa
Window ụlọ, akpa akpụkpọ ụkwụ bụ nhọrọ
Arcadia Hard shei ụlọ elu ụlọ elu bụ ihe na-adịgide adịgide, nke kachasị mma maka ebe ị na-adọkpụ ụgbọala ma ọ bụ ụgbọ ala gị .Hard Shell Rooftop Tents na-adị ogologo oge karị. Ọ bụghị naanị na ha enweghị mmiri kpamkpam, mana ha nwere ike ịlanarị snow ma na-ejikwa ifufe. Hard Shell Roof Top Tents na-abụkarị ihe kachasị mfe ịtọlite, ị na-etinye ha n'ụzọ nkịtị na racks ụlọ, na mgbe ị dị njikere ịbanye n'ime, nanị bulie otu akụkụ ma ọ dị mfe ma dị mfe, na-ewekarị ihe na-erughị otu nkeji.
Ogo: 203 * 138 * 100CM
Shell: Faiba glaasi
Uwe: 280G polycotton
Ubube Aluminium Telescopic Ladder
Styleszọ abụọ bụ nhọrọ
Arcadia swag zuru oke maka ịma ụlọikwuu, ịgagharị, ịgagharị ma ọ bụ ngwụsị izu, nke dị ngwa, dị mfe, na-adịgide adịgide, ihu igwe na-eguzogide ọgwụ, 1 ma ọ bụ mmadụ abụọ nwere ntụsara ahụ, otu, eze ma ọ bụ okpukpu abụọ .Swags gụnyere akwa ụfụfụ, dị mfe ịtọlite ​​na na-eburu anyị nkwa dị mma .Ọ na-egosipụtakwa PVC waterproof floor onu nke na-egbochi igirigi ihipu n'ime. Nhazi kachasị mma na-eji osisi aluminom dị mma na-eweta ike na nkwụsi ike.
Uwe: 400G polycotton, ripstop, mmiri na-adịghị
Ogidi: 7.9MM Aluminium osisi
Mkpọchi uwe: SBS ika
Ft: 450G ịkwanyere
Matfụfụ matraasi: 6cm ọkpụrụkpụ na nke mbughari mkpuchi
Car ụlọ ụlọ okwuchi windo
Arcadia na-emepụta otutu ihe eji eme ka mmiri ghara ịmị mmiri, n'ụdị dịgasị iche iche, iji kwado ụgbọ ala ọ bụla nwere akwa mkpuchi ụlọ. Na akụkụ nhọrọ: mgbidi dị n'akụkụ, ime ụlọ ntupu, aja ájá na ihe ndị ọzọ.
Size: dị ka ndị ahịa chọrọ
Uwe: 280G polycotton ma ọ bụ 420D nnukwu ọrụ Oxford
Ogidi: Alumnium na clip clip
Nkpuchi mkpuchi: 600G PVC
Hot Sale 2 Onye 4WD Vehicle ụlọ Top Tent Car ...
6803-Factory kpọmkwem ọkọnọ 4dd maa ụlọikwuu ụgbọ ala roo ...